Ogaden News Agency (ONA) – Maraykanka oo Qiray In La Xasuuqay Muslimiinta Rohingya.
Maraykanka oo Qiray In La Xasuuqay Muslimiinta Rohingya.
Posted by ONA Admin	/ November 24, 2017
Wasiirka Arrimaha Dibada ee Maraykanka ayaa markii ugu horeysay qiray in ay tahay “Xasuuq” dagaalka militariga Burma (Myanmar) ay ku hayaan muslimiinta dalkaasi ee loo yaqaan Rohingya.
Rex Tillerson ayaa qoraal uu Arbacadii soo saaray ku sheegay in dhibaatada lagu hayo dadka Rohingya ay tahay “Xasuuq ku saleysan Isir-sooc” (ethnic cleansing), warkan ayuu soo saaray maalmo kadib markii uu dib uga soo noqday safar uu todobaadkii hore ku tagay dalkaasi.
Xaqiijinta Xasuuqan ayaa ah mid ku khasbaysa dalalka Beesha Caalamka in ay talaabo ka qaadaan dowlada Myanmar. Maraykanka ayaa dhankiisa sheegay in ay diyaarinayaan talaabooyin ka dhan ah dowlada Militariga ee wadankaasi.
Qaramada Midoobay (QM) ayaa horay u sheegtay waxa ka socda dalka Myanmar (Burma) in ay tahay xasuuq baahsan oo lagu baro kiciyey 800 oo kun oo muslimiin ah, waxaana loo aqoonsaday caalamka oo dhan xasuuqa ugu baahsan ee xiligan socda.